Jereo i Afrika Tsy Ho Asehon’ny Media Anao Mandrakizay · Global Voices teny Malagasy
Jereo i Afrika Tsy Ho Asehon'ny Media Anao Mandrakizay
Voadika ny 26 Jona 2015 6:11 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Deutsch, 日本語, Español, русский, မြန်မာ, bahasa Indonesia, Ελληνικά, English
Pikantsarin'ny sasantsasany amin'ny sary hita amin'ny hashtag #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou ao amin'ny Twitter.
Ny fandokoana an'i Afrika nataon'ny gazety be mpanaraka, indrindra fa ny fampitam-baovao tandrefana, no mandoko azy ho toerana maizina, ratsy, tsy misy fanantenana anjakan'ny ady an-trano, vondrona mitam-piadiana, kolikoly, fanitsakitsahana ireo karazam-pahafahana, hanoanana, korontan'ny fifehezana ny tanandehibe ary ny fahakiviana tanteraka. Mahatonga ny olona tsy mbola nandeha taty Afrika ho diso eritreritra momba ny kaontinanta izany.
Niara-nirona ary ny Afrikana ato amin'ny Twitter hampiseho ny hatsarana, ny fahamaroana sy ny havaovaon'ny maritrano maoderina eto amin'ny kaontinanta izay zara raha asehon'ny fampitam-baovao tandrefana amin'ny mpijery, mpihaino ary ny mpamaky azy izany. Nanomboka tamin'ny hashtag #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou nataon'ny mpisera Twitter Mango izany:
Miaraha aminay hampiseho ny hatsaràn'i Afrika
Vetivety monja taorian'izany, maro ireo mpisera nanatevin-daharana ny ezaka. Indro ny santionan'ny sioka hita tao amin'ny fanentanana.
BadassAfricanne: “Afrikana mihinana bibikely”
Limpopo, Afrika Atsimo:
Ao Lagos tanàna iray manontolo naorina avy amin'ny tany tamin'ny ranomasina. Fandrosoana mivaingana
Soweto, Afrika Atsimo:
Tanàna ambanivohitra Afrikana:
Tanàna nentim-paharazana Afrikana isan-karazany
Trano Nubia ao Aswan, Ejipta
Tanindrazan'ny fianakaviako mahafinaritra ao Cape Verde
Misy ny fitomboan'ny faniriana lalina eo amin'ny Afrikana hifehy ny fitantaran-dry zareo ary ohatra iray amin'izany ny hashtag #TheAfricaTheMediaNeverShowsYou. Misy koa ny tranonkala tahaka an'i Africa is Country sy ny This is Uganda miezaka ny hanova ny famariparitana an'i Afrika ao amin'ny fampitam-baovao lehibe.
Fanamarihana avy amin'ny tonia amin'ny teny malagasy : manasa anao izahay hitsidika ny Global Voices teny malagasy niavian'ity lahatsoratra ity raha toeran-kafa no ahitanao azy.